Chikwata cheNhabvu yeMadzimai ChemaMighty Warriors Chogadzirira Mutambo Mukuru Wema All Africa Games Qualifiers NeAngola
Vatambi venhabvu yemadzimai kana kuti maMighty Warriors vari mugadziriro yemutambo wekupedzisira nechikwata cheAngola mumakwikwi emutambo wemaAll Africa Games Qualifier uchatambirwa kunhandare yeRufaro muHarare nemusi weSvondo.
Angola iri kutarisirwa kusvika munyika neChishanu. Mitambo yemaAll Africa Games ichatambirwa kuMozambique muna Gunyana wegore rino. MaMighty Warriors ari kutarisirwa kusimbiswa nerutsigirwo rwaachawana kubva kuvatsigiri neSvondo kuti vatambe zvakanaka pamutambo uyu.
MaMighty Warriors vakaita mangange 1-1 neAngola masvondo maviri apfuura apo zvikwata izvi zvakatamba pamutambo wekutanga kuAngola kwakare.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa muchikwata chemaMighty Warriros, Muzvare Alice Mwale vaudza Marvellous Mhlanga-Nyahuye weStudio 7 vari kutairisira kuti vatsigiri venhabvu vachabuda nemusi weSvondo vakananga kuRufaro kunotsigira chikwata chavo.
Hurukuro naMuzvare Alice Mwale